Roodhiga koraya | January 2020
Ugu Weyn Ee Roodhiga koraya
Nambar kasta oo ku yaal liiska shaqadiisa ayaa leh dhaqan, markaad sii kordheyso taas oo had iyo jeer hadaba wax qalad ah, wax aan haysan. Dalagyada noocyada badan ee badan, radishes waa ka reeban. Dhaqanka ugu caansan. Waxay u muuqataa in ay jiraan aqoon ku filan beerashada dabocase, laakiin beergooyska ma aha mid faraxsan - dabo saboolka ah ayaa kori doona.
Waa maxay sababta dabocase uu qadhaadh yahay, iyo dhibaatooyin kale marka korayo
Bannaanka u badan ayaa leh radishes oo la xidhiidha furitaanka xilli khudradeed, ballaaran gu'ga iyo guulihii hore ee beerta. Ka dib oo dhan, dalagyada xididada gebi ahaanba uma baahna xaalado gaar ah oo aad u fududahay in lagu hayo. Laakiin, nasiib daro, marar badan waxay sidoo kale noqdaan niyad-jebinta koowaad. Waa maxay sababta dabocadta u tagaan feerka, siinaysaa qadhaadh ama hollows, waxa khaladaadka beeralayda khudradda ka samaysan, waxa la sameeyo si loo badbaadiyo dalagga - waxaan ka sheekeyn doonaa wax walba tan dambe ee maqaalka.
Qaababka beeritaanka iyo dabocase sii kordhaya ee lagu koriyo, diyaarinta, daryeelka
Radish waa mid ka mid ah khudradda caanaha ugu caansan ee suuqa gudaha, iyo haddii aad weli tixgeliso suurtagal ah ee sii kordhaya itoobiya sanadka oo dhan, ka dibna ma jiro qiimaha warshad dhan. Si kastaba ha ahaatee, si aad u hesho dalagyo xididdo casiir leh oo dhadhan leh wakhti kasta oo sanadka ah, waxaa haboon in la daryeelo xaalado ku habboon koritaanka iyo horumarkooda.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Roodhiga koraya 2020